कसरी अनलाइन सामान बेच्न | शरणार्थी लागि जानकारी & आप्रवासी enterprenuers | शरणार्थी केन्द्र अनलाइन
तपाईं पैसा बिक्री उत्पादनहरु कसरी अनलाइन बनाउन सिक्न चाहनुहुन्छ? सामान कसरी अनलाइन बेच्न सिक्न.
सामान कसरी अनलाइन बेच्न सिक्न: अनलाइन व्यापार तपाईं आफ्नो शारीरिक उत्पादनहरु बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ निर्माण अतिरिक्त आय बनाउन ठूलो तरिका हो. यो यस्तो हस्तनिर्मित आभूषण रूपमा पैसा बिक्री वस्तुहरू बनाउन सम्भव छ, परम्परागत लुगा, वा अन्य कुराहरू तपाईं आफैलाई बनाउन वा कम मूल्य फेला पार्न र एक उच्च मूल्य लागि बेचन. अनलाइन स्टोर "ई-वाणिज्य।" अक्सर भनिन्छ यहाँ तपाईंको ई-वाणिज्य व्यापार खोल्न र केही आय बनाउन तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ केही कदम हो:
1. तपाईंको विचार फेला पार्न र यसलाई प्रतिबद्ध.
तपाईं आवश्यक पहिलो कुरा, ई-वाणिज्य बाहिर सुरु गर्न एक अद्वितीय विचार छ. त्यहाँ मान्छे उत्पादनहरु बिक्री धेरै अनलाइन, र तपाईं तपाइँको बाहिर खडा गर्न आवश्यक. आफैलाई सोध्नुहोस्, के मेरो विचार छ? कसरी अरूबाट अद्वितीय छ, वा म कसरी यो अद्वितीय बनाउन सक्छ? तपाईं लुगा बिक्री गरिनेछ, आभूषण, वा कलाकृति केही प्रकार? तपाईं आफ्नो उत्पादनहरु अद्वितीय र मनमोहक बनाउन भने, अधिकांश मानिसहरू थप यसलाई किन्न संभावना हुनेछ.
एक कारगर व्यापार विचार फेला पार्न अर्को तरिका बजार मा एक आवश्यकता पहिचान गर्न छ. तपाईं मान्छे चाहिन्छ भनेर एक उत्पादन गर्न सक्षम छन् भने, तपाईंले अनलाइन बजार यसलाई ल्याउन सक्छ. केही उत्पादनहरु सजिलै perishable छन्, त्यसैले तपाईं आफ्नो उत्पादन राम्रो अनलाइन बेच छ भने निर्धारण गर्नुपर्छ. छन् तपाईं प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ढुवानी सेवा को धेरै छ, तर तपाईं बस तपाईं खरीदार गर्न उत्पादन प्राप्त गर्न आफ्नो भाग गरिरहेका छन् सुनिश्चित गर्न आवश्यक हुनेछ. यो एक अनलाइन कारोबार को निर्माण कार्य धेरै हुनेछ, कि छ तपाईं को आवश्यक के यो गरेको प्राप्त गरिरहेको प्रतिबद्ध हुनुपर्छ किन.
2. आफ्नो उत्पादन बनाउन.
अब, तपाईं एउटा विचार छ कि, यसलाई आफ्नो उत्पादन गर्न समय. निश्चित आफ्नो उत्पादन ठूलो गुण र लायक बिक्री को छ बनाउन. तपाईं आफ्नो ग्राहकहरु बैठक उद्देश्य संग लग डिजाइन गर्नुपर्छ’ आवश्यकता. सादगी आफ्नो डिजाइन शोधन राख्न, त्यसैले यसलाई आफ्नो ग्राहकहरु लाई आँखा तेतैतिर छ.
कसरी पैसा उत्पादनहरु अनलाइन बिक्री गाह्रो हुन सक्छ बनाउन. एक गर्नुपर्छ कुराहरू एक तपाईं आफ्नो उत्पादन गर्न आपूर्तिकर्ता या निर्माताहरु काम गर्न आवश्यक छ भने निर्धारण गर्न छ. तपाईँलाई ब्याटिङ बन्द सिद्ध उत्पादन गर्न आशा गर्न सक्दैन, तर यदि तपाईं विवरण ध्यान राख्न र यसलाई सुधार राख्न, तपाईं अन्ततः मान्छे को लागि तिर्न तयार छन् कि एक उत्पादन संग समाप्त हुनेछ.
3. आफ्नो आला बजार निर्धारण.
तपाईं आफ्नो उत्पादन बनाउन एक पटक, त्यसपछि यो तपाईं आफ्नो उत्पादन बेच्न चाहन्छु जो पहिचान गर्न समय. बरु एक व्यापक बजार मा आफ्नो उत्पादन बेच्न प्रयास को, यो मान्छे को एक सानो समूह आफ्नो संभावित ग्राहक हुन सक्छ जो पहिचान गर्न महत्त्वपूर्ण. तपाईं पनि आफ्नो जनसंख्या तथ्याङ्क र चासो को समझ हुनुपर्छ, त्यसैले तपाईं आफ्नो उत्पादन तिनीहरूलाई कसरी मदत गर्न सक्छ को समझ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईं राम्रो तिनीहरूलाई आफ्नो उत्पादनहरु को मूल्य कुराकानी गर्न सक्छ यसरी.
4. आफ्नो ब्रान्ड परिभाषित.
तपाईं आफैलाई बाहिर खडा गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अर्को तरिका एक अद्वितीय ब्रान्ड परिभाषित द्वारा छ. आफ्नो ब्रान्ड कसरी तपाईं आफ्नो ग्राहकहरु हेर्न चाहनुहुन्छ प्रतिनिधित्व, र यो बजार मा सबै अन्य प्रतियोगिहरु तपाईंले अलग हुनेछ. के तपाईं चाहनुहुन्छ कि ठूलो ब्रान्डहरु हेर्न र देख्न र तिनीहरूले अरूबाट आफूलाई अलग कसरी गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईं आफ्नो प्रेरणा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईंको ब्रान्ड डिजाइन को आफ्नो अद्वितीय तरिका छ. ठूलो ब्रान्डहरु बस तिनीहरूले के तपाईं बताउन छैन, तिनीहरूले के किन तिनीहरूले तपाईंलाई बताउन, तिनीहरूले मान आधारित छन् जसको अर्थ.
स्याउ कम्पनी संसारमा सबैभन्दा ठूलो ब्रान्डहरु मध्ये एक छ, तिनीहरूले कम्प्युटर र आईफोनहरु सिर्जना, तर के उनलाई differentiates तिनीहरूले नवीनता वा फरक सोच विश्वास किनभने. तपाईं को लागि समान जान्छ, तपाईं बनाउन र बेचन टी-शर्ट यदि, तपाईं केवल आफ्नो ग्राहकहरु छैन भन्नु पर्छ तपाईंले बेच्न टी-शर्ट, तर तपाईँले बेच्न किन तिनीहरूलाई व्याख्या गर्नुपर्छ. तपाईं आफ्नो ब्रान्ड तपाईं अनुपम छ कि एउटा नाम दिनुपर्छ. साथै, तपाईं अद्वितीय फन्टहरूको साथ एक लोगो गर्नुपर्छ. कहिलेकाहीं ब्रांडेड तस्बिरहरू लगानी आफ्नो ब्रान्ड को विश्वसनीयता निर्माण हुनेछ.
5. आफ्नो अनलाइन स्टोर सिर्जना.
त्यहाँ प्लेटफर्म र सेवा तपाईं आफ्नो उत्पादनहरु बेच्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ धेरै अनलाइन. यहाँ सबै भन्दा साधारण हुन्छन्. तपाईं कानुनी मुद्दा आफूलाई रक्षा गर्नुपर्छ र यो साइट केही समेट्छ ई-वाणिज्य गर्न कानुनी गाइड.
BigCommerce – BigCommerce एक अग्रणी ई-वाणिज्य मञ्च हो. तिनीहरूले मार्केटिङ र कुराकानीमा निर्माण भएको अनुकूलित ई-वाणिज्य सफ्टवेयर छ, त्यसैले तपाईं आफ्नो उत्पादन प्रवर्द्धन र तिनीहरूलाई थप बेच्न सक्नुहुन्छ.
अमेजन – अमेजन बिक्रि सेवाहरू आफ्नो उत्पादनहरु अनलाइन बेच्न तपाईं सक्षम हुनेछ छ. तपाईं आफ्नो उत्पादनहरु बेच्न र आफ्ना व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोग गरेर आफ्नो आदेश व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ. तिनीहरूले पनि यस्तो ढुवानी तपाईं फाइदा लिन सक्छ कि सेवा जस्तै छ.
Etsy – Etsy एक वैश्विक बजार तपाईँले किन्न वा हस्तनिर्मित सामान बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ छ. यो एक विशिष्ट तपाईं जस्ता रचनात्मक मानिसहरू विशिष्ट दस्तकारी टुक्रा बेच्न चाहने लागि विकसित गर्नुपर्छ.
Shopify – Shopify ई-वाणिज्य समाधान तपाईँको अनलाइन स्टोर आफ्नो माल सेट अप गर्न र बेच्न अनुमति दिन्छ. यो पनि संगठित र आफ्नो उत्पादनहरु बेच्न अनुमति दिन्छ, स्वीकार क्रेडिट कार्ड, ट्र्याक र आदेश प्रतिक्रिया.
eBay – eBay ठूलो ई-वाणिज्य निगम छ कि सुविधाहरु उपभोक्ता यसको वेबसाइट मार्फत व्यापार बिक्री गर्न उपभोक्ता वा व्यवसाय गर्न. एक विक्रेता रूपमा, तपाईं सामान र सेवाहरू को एक विस्तृत विविधता बेच्न सक्नुहुन्छ.
6. ग्राहकहरु संग सम्बन्ध कायम.
व्यापार मा, तपाईं मात्र आफ्नो ग्राहक सेवा रूपमा सफल छन्. त्यसैले, यसलाई आफ्नो ग्राहकहरु संग विश्वास निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण, यदि तपाईंको ग्राहकहरु तपाईं भरोसा छैन, तिनीहरूले तपाईंलाई अर्को कम्पनी को लागि छोडेर हुनेछ. आज, ग्राहकहरु आफ्नो अनुरोध गर्न एक समय प्रतिक्रिया चाहनुहुन्छ, त्यसैले यो तपाईं धेरै सञ्चार च्यानलहरू प्रस्ताव जहाँ तिनीहरूले तपाईं पुग्न सक्नुहुन्छ महत्त्वपूर्ण. चाहे त्यो इमेल छ, फोन नम्बर, वा सामाजिक मिडियामा.
सबैभन्दा ग्राहकहरु सामाजिक मिडियामा आफ्नो समय खेर फालेका छन्, यी प्लेटफर्ममा संवाद र तिनीहरूलाई अन्तरक्रिया गर्न महत्त्वपूर्ण. एक समय तरिका रूपमा आफ्नो आवश्यकता प्रतिक्रिया, र आफ्नो उत्पादन मा आफ्नो प्रतिक्रियाको लागि अनुरोध. तिनीहरूले आफ्नो उत्पादन चाहँदैनन् भने तिनीहरूले किन्न पछि, सजिलो तिनीहरूलाई आफ्नो उत्पादन फर्कन लागि बनाउन.
7. बजार & आफ्नो उत्पादनहरु बेच्न.
ग्राहकहरु कुनै पनि व्यापार जीवनरक्त हो; त्यसैले तपाईं निरन्तर व्यापार सफल गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं आफ्नो ग्राहकहरु संग एक मजबूत सम्बन्ध निर्माण हुनुपर्छ. तपाईं सिद्ध मार्केटिङ रणनीति प्रयोग गरेर यो काम गर्न सक्नुहुन्छ; यस्तो विज्ञापन रूपमा, अनलाइन मार्केटिङ, र सामाजिक मिडिया प्लेटफर्ममा प्रयोग गरेर आफ्नो सम्बन्ध कायम राख्न. यो संचार को रेखा आफ्नो ग्राहकहरु संग खुला राख्न राम्रो विचार छ, त्यसैले तिनीहरू तपाईं चिन्नुहुन्छ र तपाईं के प्रतिनिधित्व गर्छन्.
आजकल, मान्छे भावना आधारित उत्पादनहरु खरीद रहे, तिनीहरूले केही महसुस गर्न चाहनुहुन्छ किनभने तिनीहरूले किन्न. थाहा छ र आफ्नो उत्पादनहरु तिनीहरूलाई महसुस गर्नेछ कसरी सम्बोधन गर्न सक्षम हुन महत्त्वपूर्ण. तपाईं एक उत्पादन छ भने अन्य मानिसहरू फाइदा, तपाईं यसलाई बिक्री को डराउनु हुँदैन.
पैसा अनलाइन उत्पादनहरु बिक्री गर्न कसरी
बिक्री आफ्नो संभावित ग्राहकहरु लाई आफ्नो उत्पादन को मूल्य सञ्चार बारेमा छ. तपाईं आफ्नो आवश्यकता वा चाहना आफ्नो उत्पादन फाइदाको मेल गर्न प्रयास गर्दै. त्यसैले, तपाईं आफ्नो उत्पादनहरु बारेमा राम्रो ज्ञान छ र तिनीहरूले हुन सक्छ कुनै पनि प्रश्नहरूको जवाफ गर्न सक्षम हुनुपर्छ. तपाईं यो काम गर्न सक्नुहुन्छ भने, तपाईं आफ्नो उत्पादनहरु प्रभावकारी बेच्न सक्षम हुनेछ. साथै, तपाईं आफू र आफ्नो परिवारलाई सहयोग गर्न केही पक्ष आय बनाउन सक्षम हुनेछ.
कसरी बाट Supplyspy.com एक अमेजन व्यापार सुरु गर्न को लागि सुझाव